Kheyraadka aad karti ugu leedahay telefoonka | War gadget
Ignacio Sala | | Aplicaciones, Kumbuyuutarro
Markii aan maqalno ku-saabsan is-gaarsiinta, dad badan ayaa si khaldan u maleeya inay taasi tahay daawo. Ka shaqee guriga Waxay leedahay faa'iidooyinkeeda iyo dib u dhacyadeeda, Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka ay tahay inaan qiimeyno ka hor inta aan la tixgelin suurtagalnimada in mid ka mid ah shaqaalaheenna, ama nafteenna, aan ku qabanno shaqadeena guriga iyadoo aan loo baahnayn inuu tago goobta shaqada.
Samee jadwal shaqo, ixtiraam xuquuqda u gaarka ah iyo kala-goynta dhijitaalka ah, go'aamiya cidda daryeeli doonta waxyaabaha lagama maarmaanka ah (kombuyuutarka, taleefanka gacanta, daabacaha ...) iyo kharashyada ka soo baxa (internetka, korontada, kululaynta ...) .. waa qaar ka mid ah dhinacyada ay tahay inaynu ku xisaabtano marka ay timaado ka shaqeynta guriga iyo in ay tahay inaan aasaasno marka ugu horeysa uguna muhiimsan.
Markii aan heshiis la galno shaqo-bixiyahayaga ama shaqaaleeyahaaga shuruudaha ugu habboon ee lagama maarmaanka u ah in aan ku qabanno shaqadeena guriga, hadda waxaa la joogaa in la ogaado waxa qalabka aan gacanta ku hayno inaad meel fog ka shaqeyn karto.
1 Kooxda Xogta
2 Barnaamijyada lagu abaabulo shaqada
3 Barnaamijyada isgaarsiinta
3.1 Kooxda Microsoft
5 Barnaamijyada wicitaanka fiidiyowga
6 Codsiyada si fog loogu xiriiro
6.2 Desktop-ka fog
Cunsurka ugu horreeya ee lagama maarmaanka ah ee lama huraanka u ah inuu ka shaqeyn karo guriga waa qalabka kombiyuutarka, ha noqdo kombiyuutar desktop ama laptop ah. Illaa aad tahay naqshadeeye garaaf ah, oo leh a qalabka dhexdhexaadka ah, waxaad heli doontaa in ka badan oo kugu filan oo aad ku qaban karto shaqadaada meel fog.
Inaad waqti badan ku qaadato kumbuyuutarka hortiisa, haddii aan doorano laptop-ka sababo la xiriira meelaha bannaan, waxa ugu horreeya ee maskaxda lagu hayo waa cabbirka shaashadda: ka weyn ayaa fiican, illaa aan haysanno kormeeraha ama telefishanka guriga oo aan ku xiri karno laptop-ka. Haddii aadan rabin inaad lacag badan ku bixiso, in kombiyuutar Waxaad ka heli kartaa kombuyuutarro gacan labaad ah qiimo aad u wanaagsan oo dammaanad leh.
Sida loo abaabulo shaqada ayaa ah waxa ugu horeeya uguna muhiimsan ee ay tahay inaan tixgalino marka aan ka shaqeyneyno guriga. Dareenkan, Trello si uu ula wareego shaqadeena meel fog waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican hadda laga heli karo suuqa. Codsigan ayaa noo oggolaanaya inaan abuurno guddi aan ku dari karno oo u qaybin karno howlaha kala duwan ee shaqaalaha / waaxda shirkadda ay tahay inay qabtaan.
Asana, waxay na siisaa ficil ahaan isla shaqeynta Trello laakiin waa ka badan tahay mashruuca u janjeedha, mashaariicda leh taariikhda bixinta, waxay leeyihiin maamuleyaal taxane ah waxayna u baahan yihiin horumarin taxane ah oo madax-bannaan in la fuliyo. Si ka duwan adeegyada kale ee noocan ah, mid kasta oo ka mid ah mashaariicda ayaa ku dari kara faylasha lagama maarmaanka u ah horumarintooda ama la-tashiga.
Ilaa maantadan la joogo, qofna ma diidi karo in xafiiska 365 uu yahay midka ugu fiican xallinta otomatiga xafiiska si loo abuuro nooc dukumeenti ah. Sanadihii la soo dhaafay, Microsoft waxay diiradda saartay horumarinta shaqada daruuraha marka lagu daro isku-darka barnaamijyadeeda kala duwan ee Ofiice sidaa darteed dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah waxay ku jiraan gujinta jiirka.
Si loo hagaajiyo isgaarsiinta shirkadda dhexdeeda, waxaan haynaa kooxdayada Microsoft Team, a aaladaha isgaarsiinta ee cajiibka ah ee ku milmaya Office 365. Kaliya noo oggolaan mayno inaan yeelanno wadahadal kooxeed, laakiin sidoo kale waxay noo oggolaaneysaa inaan wicitaanno fiidiyoow ah sameyno, taasoo ka dhigaysa xalka ugu dhammaystiran ee dhammaan-hal-ka-shaqaynta guriga.
Slack waa aalad loogu talagalay fariin iyo wicitaan maadaama ay noqon karto mid kale, laakiin si ka duwan kuwan, Slack wuxuu noo ogolaanayaa inaan abuurno waxyaabo kala duwan qolalka lagu sheekaysto, loo yaqaan kanaallada, si loola macaamilo mowduucyo ama mashaariic kala duwan. Kuu ogolaanayaa inaad dirto feylasha, abuurto munaasabado, qolal shirar dalwaddii ...
Boqorka codsiyada xafiisku waa oo uu sii ahaan doonaa Xafiiska. Xafiiska wuxuu ka kooban yahay barnaamijyo kala duwan sida Word, Excel, Powerpoint, One Note iyo Access. Dhamaantood waa waxaa laga heli karaa biraawsar marka laga reebo Access, inkasta oo aan toos ugala soo dagsan karno kombuyuutarkeena haddii aanan dooneyn inaan ku isticmaalno khadka tooska ah.
Tirada howlaha dhammaan barnaamijyadan ay na siinayaan ficil ahaan aan xad lahaynWixii wax ah, waxay suuqa ku jirtay 40 sano. Xafiiska 365 ma ahan lacag la'aan, laakiin wuxuu ubaahanyahay rukhsad sannadeed, isdiiwaan gelin sanadle ah oo loogu talagalay 1 isticmaale qiimahoodu yahay 69 yuuro (7 euro bishii) iyo sidoo kale waxay na siisaa 1 TB oo keyd ah OneDrive iyo suurtagalnimada isticmaalka labada codsi on macruufka iyo Android. Haddii aad sidoo kale isticmaasho Microsoft Teams iyo Skype, isdhexgalka aad ka heli doonto lagama heli karo nooc kale oo ka mid ah codsiyada wax soo saarka.
Xafiiska Apple 365 waxaa lagu magacaabaa iWork, wuxuuna ka kooban yahay Bogag (processor processor), Lambarro (xaashiyaha isweydaarsiga) iyo Muhiim (bandhigyo). Software-kan ayaa loo heli karaa soo dejinta gebi ahaanba bilaash iyada oo loo marayo Mac App Store. Xagga shaqooyinka, waxay na siisaa tiro aad u tiro badan, laakiin maaha heer aan ka heli karno Xafiiska 365.
Qaabka barnaamijyadan, kuma jaanqaadi karto barnaamijyada ay bixiso shirkadda Microsoft iyada oo loo marayo Xafiiska 365, marka waa inaan u dhoofino dukumintiga qaab Word, Excel iyo Powerpoint ah haddii ay tahay inaan la wadaagno dadka kale ee aan isticmaalin iWork.
Qalabka bilaashka ah ee Google ay noo diyaariso waxaa lagu magacaabaa Google Docs, aalad ka kooban barnaamijyada shabakadaha Documents, Spreadsheets, Presentations, forms Barnaamijyadan waxay ku shaqeeyaan oo keliya adoo adeegsanaya biraawsar, lagama soo degsan karo kombiyuutarkayaga.
Tirada howlaha ay na siiso waa mid aad u xaddidan, gaar ahaan haddii aan barbar dhigno xafiiska Microsoft ee 'Office 365', si kastaba ha noqotee, in la abuuro nooc kasta oo dokumenti ah iyada oo aan wax badan laga buuxin ayaa ka badan inta ku filan. Dabcan, waa in lagu xisaabtamo in feylasha loo abuuray qaab kaas Iyagu ma waafaqsana Office 365 ama Apple iWork.
Barnaamijyada wicitaanka fiidiyowga
Haddii shirkaddaadu qaadatay xalka Xafiiska 365, xalka ugu fiican ee lagu raaxaysan karo is-dhexgalka ay Microsoft na siiso dhammaan barnaamijyadeeda waa Skype. Skype waxay noo ogolaaneysaa wicitaanada fiidiyowga oo ay la socdaan ilaa 50 isticmaale, wadaag shaashadda qalabkayaga, dir faylasha, duubista wicitaannada fiidiyowga iyo kuwa kale ee noqoshada farriin fariin ah.
Skype laguma heli karo oo keliya dhammaan desktop-yada iyo nidaamka deegaanka, laakiin sidoo kale, sidoo kale wuxuu ku shaqeeyaa shabakadda, taasi waa, iyada oo loo marayo biraawsar iyada oo aan loo baahnayn in lagu rakibo wax kombiyuutar kombiyuutarkeena.
Zoom waa adeeg kale oo aan u adeegsan karno wicitaannada fiidiyaha ee shaqada. Si bilaash ah, waxay noo ogolaaneysaa inaan wax ku ururino 40 qof oo isku qol ah, ugu badnaan muddada wicitaanka fiidiyaha ee 40 daqiiqo. Haddii aan adeegsanno nooca la bixiyay, tirada ugu badan ee kaqeybgalayaasha wicitaanka fiidiyowga ah waxay kordheysaa ilaa 1.000.
Codsiyada si fog loogu xiriiro
Haddii barnaamijka maareynta shirkaddaadu uusan soo bandhigin xal in meel fog laga shaqeeyo, TeamViewer wuxuu noqon karaa xalka aad raadineyso, maadaama wuxuu noo ogolaanayaa inaan meel fog kula xirno qalab kale oo la falgal, haddii la adeegsanayo codsi, nuqul faylasha ... TeamViewer ayaa loo heli karaa Windows iyo sidoo kale macOS, Linux, iOS, Android, Raspberry Pi iyo Chrome OS.
Chrome, iyada oo loo marayo kordhin, sidoo kale waxay noo ogolaaneysaa inaan meel fog ka maamulno koox, laakiin ka duwan TeamViewer, ma wadaagi karno feylasha, sidaa darteed waxay kuxirantahay baahiyaheena, ikhtiyaarkan ikhtiyaariga ah ayaa lagayaabaa inuu kafiicnaado ikhtiyaarka lacag bixinta ah ee ay TeamViewer na siiso.
sidaas darteed TeamViewer sida Desktop-ka fog Waxay u baahan yihiin qalab fog oo kuxiran oo shidan 24 saac maalintii, laakiin taasi waa xalka kaliya ee maanta laheli karo si fog looga shaqeeyo, sidoo kale barnaamijka maareynta shirkadeena ma bixiso ikhtiyaarkaas.
Haddii aan nasiib u yeelanno in shirkaddeennu ay leedahay suurtagalnimada inay ka faa'iideysato barnaamijka maareynta meel fog, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan kireyno VPN si xiriirka ka dhexeeya kooxdeena iyo shirkadaha shirkadda ayaa ah mid sir ah wakhti kasta oo cidna oo ka baxsan, ma dhex-geli karto is-gaadhsiinteenna.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Aplicaciones » Kheyraadka aad awoodid inaad ku shaqaysatid